Patrick Vieira oo difaacay Granit Xhaka, isagoo dhinaca kale ku baaqay in la taageero Unai Emery – Gool FM
(London) 13 Nof 2019. Kabtankii hore kooxda Arsenal ee Patrick Vieira ayaa difaacay Granit Xhaka kaddib markii xiddiga khadka dhexe ee reer Switzerland laga xayuubiyay calaamada kabtanimada ee Gunners, kaddib caradii uu ku hor muujiyay taageerayaasha bishii lasoo dhaafay.
Granit Xhaka ayaa carro xoogan ku hor muujiyay taageerayaasha Arsenal kaddib markii la badalay qeybta labaad ee kulankii Crystal Palace ee ku soo idlaaday barbaro 2-2, wuxuuna shaxda kooxda ka maqnaa tan iyo xilligaas.
Patrick Vieira ayaa u sheegay warbaahinta dalka England:
“Waan ka xumahay isaga sababtoo ah wuxuu ahaa hoggaamiye, runtiina wuxuu marayaa xilli adag iyo waqti adag oo kooxda Arsenal ah”.
“Waxaan u maleynayaa inay tahay inaan is xasuusino inuu guulo badan gaaray tan iyo markii uu yimid Arsenal, wuxuuna u qalmaa ixtiraam badan”.
“Marka aad ciyaartoy tahay oo aadan u dhaqaaqin sida aad fileysay, waxaad dareemeysaa jahwareer naftaada ah, mararka qaar waxaad sheegeysaa waxyaabo qaar ama waxaad sameyneysaa falal qaar waadna ka qoomamaysaa”.
Intaas kaddib Patrick Vieira oo kula guuleystay kooxda Arsenal saddex jeer horyaalka Premier League ayaa wuxuu ugu baaqay taageerayaasha inay taageeraan Unai Emery.
“Waxaan qabaa inuu leeyahay qibrad ku filan oo uu kaga gudbi karo marxaladan adag, waa inaan taageerno oo aan siinaa waqti uu isbedel ku sameeyo”.